समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राजनीतिमा आएँ : महेशमान - Lumbini Times
508 views | लुम्बिनी टाइम्स संवाददाता | सोमबार, १८ मंसिर ।
महेशमान सिंह बुटवलका चिरपरिचित उद्योगी व्यवसायी हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१ नया सडकमा रहेको घरमा २०१९ पौष १० गते बुबा सुरदिप्तमान सिंह र आमा पद्मादेवी सिंह पुत्रका रुपमा उनी जन्मिएका हुन् । उजिर सिंह हाई स्कुलमा प्रारम्भिक शिक्षा र बुटवल हाई स्कुलमा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा लिई उनले २०४० सालमा त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । पुर्खौली पेशाको रुपमा बुबाले गर्दै आएको औषधोपचार (मेडिकल) लाई आधुनिक र व्यवस्थीत गर्दै दाजु डा. रमेशमान सिंहको रेखदेखमा क्लिनीक र औषधीको थोक बिक्रेताको रुपमा सिंह मेडिकल संचालन गर्दै आएका उनी यसका अलावा मायादेवी टेक्नीकल कलेज, सिद्धार्थ कलेज, साईन रेशुङ्गा डेभलेपमेण्ट बैंक, हिमालय अटोमोवाइल्स, बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि. र रेडियो नमस्ते जस्ता व्यवसायीक प्रतिष्ठान, बैंक तथा संचार गृहहरुको प्रमुख तथा संचालकको रुपमा क्रियाशिल छन् । साथै बुटवलको सबैभन्दा जेठो र गौरवशाली इतिहास बोकेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको अध्यक्ष भई नेतृत्व क्षमताको पहिचान दिनुका साथै नारायणी पश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सामाजिक संस्था लायन्स इन्टरनेशनल अन्तर्गत बुटवल लायन्स क्लवको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सिंहले बहन गरिसकेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष सिंह अहिले राजनीतिक मैदानमा ओर्लिएका छन् । रुपन्देही क्षेत्र नं २ को २ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका उनी राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । उद्योगी व्यवसायीको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्र्दै उम्मेदवार बनेका उनी राजनीतिलाई समाजसेवाको रुपमा अघि बढाउन चाहन्छन् । सिंहसँग चुनाबी सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी ।
के का लागि राजनीतिमा आउनुभयो ?
म पूर्णकालीन व्यवसायी थिएँ । अहिले म राजनीतिमा आएको छु । जसरी नेपालकै वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चौधरीज्यू, राजनीतिमा अब उद्योगी व्यवसायीहरु पनि लाग्नुपर्छ र देशको विकासका लागि, देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ भनेर आउनुभएको छ, त्यसैगरी म पनि मेरो क्षेत्रको विकासका लागि खटिनुपर्छ र आफै लाग्नुपर्छ भनेरै राजनीतिमा आएको हुँ । मैले यति धेरै वर्ष बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा रहेर विकासका क्षेत्रमा जे जति भूमिका निर्वाह गरेँ, जे जसरी आफुले सकेको योगदान दिएँ, त्यसलाई अझै मलजल गर्नका लागि सक्रिय रुपमै राजनीति गर्नुपर्छ र बुटवल क्षेत्रको विकासका लागि लाग्नुपर्छ भनेर आएको हुँ । मैले सुन्छु, राजनीति धेरै भ्रष्ट, धेरै अनावश्यक चलखेल गर्ने, आफ्ना मान्छेहरुलाई भर्ती गर्ने केन्द्र बन्यो जस्ता कुराहरु । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म नेपालको राजनीति जसरी अघि बढ्यो, अब त्यसरी नै अघि बढ्न सक्दैन । नयाँ ट्याकमा लैजानुपर्छ । नयाँ नयाँ विषयमा ज्ञान भएका, दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ । हो हामी संक्रमणकालमा छौं, तर यसरी कतिन्जेल संक्रमणकाल भनिरहने ? अब परिवर्तनका लागि उठ्ने र केही गर्ने समय आएको छ । समृद्धिका लागि जाग्ने बेला आएको छ भनेरै म राजनीतिमा आएको हुँ ।
तर धेरैतिर कुरा सुनिन्छ, विगतमा जेलनेल खप्ने बेलामा आफ्नो अरु काम गर्ने, जब राजनीतिक परिवर्तनले अर्को मोड लियो, जेलनेल खप्नुपर्ने बेला आयो, तब फाईदा लिनका लागि राजनीतिमा आउनेहरु खास नेतृत्व गर्न सक्दैनन्, उनीहरुलाई आउन दिनुहुन्न भनेको ।
हो, मैले पनि सुनेको छु यस्तो कुरा । जब म राजनीतिमा आएको थिईन । त्यतिबेला अलिअलि हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । तर मैले जब जनताको घरदैलोमा पुगेर, उनीहरुका कुरा सुनेँ, समस्या बुझेँ, त्यसपछि यो अनावश्यक कुर्तक हो भन्ने लाग्यो । सबै त नभनौं, कतिपय यस्ता व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा छन्, जो आजीवन आफु नै रहिरहन चाहन्छन् । आफ्नै पोल्टामा शक्ति राखिरहन चाहन्छन् । अब यस्तो गरिदिन्छु भनेर वर्षौसम्म ब्याज खाईरहने र जनतालाई भुँईमै राख्ने, आफु शासन गरिरहने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरु पनि यहीँ छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुका कारण राजनीति बढी आलोचनाको विषय बनेको छ । राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ । १ सय रुपैयाँको सामान किन्दा १० रुपैयाँ कमिसन खानेहरुले म यसो गरिदिन्छु र मैले मात्रै गर्नसक्छु भन्ने जुन लोभ देखाएका छन्, त्यो जनताले बुझिसकेका छन् । अहिलेसम्म राजनीतिमा एउटै व्यक्ति मात्रै दोहोरियो । हाम्रो २ नम्बर क्षेत्रको कुरा गरौं, म प्रदेश सभाका लागि २ बाट उम्मेदवार बनेको छु । म उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्छु । काजीमान श्रेष्ठ १ नम्बरमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँ मजदुर क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, युवराज गिरीलाई हेर्नुस्, उहाँ लामो राजनीतिबाट खारिएर आउनुभएको छ । लाभका लागि कुनै पद लिनुभएको छैन । अहिले सेवा गर्नका लागि मैदानमा हुनुहुन्छ । हामी यो समाजले टेष्ट नगरेका व्यक्ति हौं । किन हामी निःस्वार्थ हिसाबले आएका छौं भने हामीलाई कुनैखालको लोभ छैन । चाहेको भए हामी तीनैजनाले अरु कुनै लाभको पद लिएर उम्मेदवारको रुपमा नआउन पनि सक्थ्यौं, तर हामी त्यसो गरेनौं, किनभने आश्वासनबाट आजित भएका जनतालाई विकल्प चाहिएको छ । भ्रम र आश्वासनको पोको चाहिएको छैन । सरकारले नियमित रुपमा गरिरहने काममा जस चाहिएको छैन । हामीलाई कुन पुल हामीले बनाएको भन्दै हिड्नुपरेको छैन । हामीलाई आफ्ना नातेदारलाई कहीँ भर्ती गर्नुपरेको छैन । हामी निःस्वार्थ रुपमा जनताको सेवाका लागि मैदानमा आएका छौं । हामी हिजो जुन ठाउँमा थियौं, त्यो ठाउँबाट पनि यही काम गरेका थियौं, समाजकै सेवा गरेका थियौं र अब अरु अधिकारसम्पन्न जिम्मेवारीमा पुगेर थप सेवा गर्न चाहेका छौं ।
तपाइँका एजेन्डाहरु के हुन् ?
मैले अघि नै भनिसकेँ । म अनेक लोभ देखाउन चाहन्न । भ्रमको खेती गर्न चाहन्न । सबैलाई थाहा छ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीमा रहँदा मेरा अग्रजहरुको साथबाट बुटवलको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, आदि क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बुटवलवासीलाई सर्वविदितै छ । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसको स्थापना, सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन, बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको विज्ञान भवनको निर्माण, लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका परिसर भित्र प्रसुति गृह र प्राइभेट क्याविनको स्थापना, ब्लड बैंकको भवन निर्माणमा सहयोग, बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल र बुटवल शवदाह गृह निर्माणमा सहयोग, इलाका प्रहरी कार्यालयमा कैदी घर निर्माण जस्ता विविध क्षेत्रमा हामीले काम ग¥यौं । यी कुराहरु हामीले भन्दै हिँडेनौं । काम गर्नुपर्ने थियो ग¥यौं । अब म के भन्न चाहन्छु भने, बुटवललाई हामी औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक, पर्यटकीय, रोजगारलगायतमा केन्द्र बनाउनेछौं । यो भौगोलिक हिसाबले पनि उपयुक्त थलो हो । यो प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी बनाउने थलो हो । मैले हल्ला सुनेको छु, कतिपय पार्टीका नेताहरु जहाँ गयो, त्यहाँ राजधानी बन्छ भनिदिनुहुन्छ रे, जहाँ पुग्यो त्यहाँ रेल ल्याउनुहुन्छ रे, जहाँ पुग्यो त्यहाँ लालपूर्जा दिन्छु भन्नुहुन्छ रे, सबै हामीमात्रै गर्छौं अरु त ताली बजाउने मात्रै हुन् भन्ने गरेको पनि सुन्छु । म आम मतदाता र सचेत नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी एकदमै प्रष्ट छौं, बुटवललाई नै राजधानी बनाउने विषयमा । हामीले कहिले बुटवल बनाउँछु, कहिले रुपन्देहीमा राजधानी बनाउँछु भनेर झुक्याउने काम गरेका छैनौं । अर्को कुरा, हिजोँ हामीले हरेक पाईलामा खबरदारी नगरेको भए, खबरदार भन्दै औंला नठड्याएको भए बुटवलको कुन हालत हुने थियो । बुटवलका हरेक गतिविधिमा हामी सहभागी छौं । हरेक विकासका पाईला पाईलामा साथ छौं । कहिले कहाँ, कहिले कहाँबाट राजनीति गर्ने व्यक्तिले मै यहाँको धर्तीपूत्र हुँ जसरी कुरा गरेर सुहाउँदैन । यहाँका हरेक बासिन्दालाई सम्झिनुस् र विगत सम्झिनुस् भन्न चाहन्छु । म सर्वेसर्वा हुँ भन्न मैले खोजेको छैन । म अहिलेसम्म जे जसरी राजनीति चलिरहेको छ त्यो एकपक्षीय र स्वार्थमुखी छ । जनताकेन्द्रित छैन । यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । जनता सचेत हुने बेला आएको छ । सचेत भएर मतदान गर्नुस्, विगतलाई नदोहो¥याउनुस् र गल्ती गर्नबाट जोगिनुस् भन्न चाहन्छु । एकैछिन राम्रा कुरा गरेर लोभ्याउन खोज्नेलाई मतबाट जवाफ दिनुहोस् ।
तपाइँले विकासका कुरा जोड्नुभएन, विकासका लागि तपाइँले बनाएको योजना के–के छन् ?
मैले जिते पछी धेरै ठुला ठुला काम गर्छु भन्दिन तर स–साना कार्य भए पनि यसको दिर्घकालिन प्रभावको मुल्याङकन गरी भावी पुस्ताका लागि बहुउपयोगी हुने निम्न कायहर्रु गर्नेछु ।
१)	बुटवलको मूख्य बजार क्षेत्रलाई आधुनिक, सूचना, प्रविधी र सुविधायुक्त शहरको रुपमा रुपान्तरण गर्नेछु । भन्नुको मतलव सबै क्षेत्र पार्किङ्ग सुविधायुक्त, सि.सि.टि.भि क्यामेरायुक्त, फुटपाथ र सार्वजनिक सौचालय सहितको हुनेछ ।
२)	पुरानो बुटवल बजार क्षेत्र हालको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१ लाई ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका हिसावले संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेछु ।
३)	बुटवल २ मा रहेको बुटवल अटोभिलेजलाई धुलो रहित, आधुनिक र व्यवस्थित अटोभिलेजको रुपमा विकास गर्नेछु ।
४)	बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१२ र १३ लाई बुटवलको विकासको मुल धारमा ल्याइ वृहत्तर स्पोर्ट जोनको रुपमा विकास गर्नेछु ।
५)	सैनामैना नगरपालिका वडा नं.१, २, ३ र ४ को भू–भागलाई बजार, आवास र कृषि क्षेत्रकोे रुपमा विभाजन र विकास गराई थप एउटा नयाँ आधुनिक शहरका लागि चाहिने पुर्वाधारको निर्माण गर्नेछु ।
६)	अव्यवस्थित बसोबासको (सुकुम्वासी) समस्यालाई कहिल्यै नउल्झने गरी व्यवस्थापन गर्नेछु ।
७)	यहाँका पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, एैतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण र प्रचार प्रसारमा विशेष ध्यान दिनेछु ।
८)	मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना र संचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु ।
९)	बुटवलको आसपासमै आधुनिक कृषि उपज भण्डारन (कोल्ड स्टोर सिहित) र जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनका लागि पहल र पैरवी गर्नेछु ।
१०)	अशक्त र असक्षम जेष्ठ नागरिकहरुका लागि आधारभुत सुविधा सहितको पूर्ण सरकारी आवास निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेछु ।
मैलै जनता ढाँट्दिन : गिरी